KATHMANDUTemperature 11°CAir Quality187
सुखद र उज्ज्वल भविष्यप्रतिको चिन्ताले अल्पसंख्यक भाषाहरू अभिभावकबाट सन्तानमा सर्न सकिरहेका छैनन् ।
४ पुस २०७६ शुक्रबार
विश्‍वमा मानिसले कहिलेदेखि बोल्न र लेख्‍न थाले होलान् ? करिब १.८ मिलियन वर्षअगाडि होमो हाविलिस र ०.६ मिलियन वर्षअगाडिदेखि होमो इरेक्टस वा हाइडलब्रगनसेस सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्दै आएको अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
भाषामाथि गरिएका विभिन्न अनुसन्धानले फरक–फरक धारणा ल्याए पनि केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो धारणालाई आधार मान्न सकिन्छ । मान्छेले उच्चारण गरेको पहिलो अक्षर फ र स मानिएको छ । इसापूर्व ७ सय ५० मा यो अक्षर प्रयोग गरिएको अनुसन्धानले देखाउँछ । संसारमा सबैभन्दा पुरानो लेखिआएको भाषा ‘सुमरियन’ हो । इसापूर्व ८ हजारबाट यो भाषा लेख्‍न थालिएको तथ्य छ । कनिइफरम (वज सेप) मा यो लिपि लेखिएको पाइन्छ ।
साउथ मेसोपोटामियामा यो भाषाको विकास भएको मानिन्छ । तर, यो भाषाको मृत्यु इसापूर्व दुई हजारमा भयो । यो भाषा अक्काडियन भाषामा रूपान्तरण भएको पाइन्छ । विशेषगरी अक्काडियन भाषा मेसोपोटामिया र अहिलेको आधुनिक इराक र सिरियामा प्रचलनमा थियो । तर हाल यो भाषा अस्तित्वमा छैन ।
विश्‍वमा बाँचिरहेको सबैभन्दा पुरानो भाषा हो, तामिल । त्यसपछिको पुराना भाषा संस्कृत र इजिप्सियन हुन् । करिब ५ हजार बर्षअघिदेखि यी भाषा मानव जातिले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । ७७ मिलियन मानिसले विश्‍वमा तामिल भाषा बोल्छन् । श्रीलंका, सिंगापुर, भारत, मलेसिया, माउरिटियस, साउथ अफ्रिकालगायत देशहरूमा तामिल भाषा बोलिन्छ ।
झन्डै १४ हजारले संस्कृत भाषा बोलिरहेको तथ्यांकले बताउँछ । विशेषगरी भारत, इन्डो युरोपियन, इन्डो इरानियनहरूले यो भाषा बोल्छन् । धेरै पुरानो इजिप्सियन भाषा १५ सय वर्षअघिदेखि बोल्न छाडिएको हो । करिव ५४ मिलियन इजिप्सियनहरू अरबिक भाषा बोल्ने गर्दछन् । युनाइटेड अरब इमिरेट, यमन, इजरायल, जोर्डन, इराक, लिविया, इथोपिया र कुवेतलगायत देशमा यो भाषा बोल्ने गरिन्छ । विश्‍वमा नेपाली भाषा ५७ औँ नम्बरमा पर्छ । २५ मिलियनले नेपाली भाषा बोल्ने गर्छन् ।
चिनियाँ भाषा विश्‍वमा सबैभन्दा धेरै मानिसले बोल्छन् । १.३ विलियन मानिसले चिनियाँ भाषा बोल्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्‍वको जनसंख्याको १६ प्रतिशत मानिसले यो भाषा बोल्छन् । स्पेनी र अंग्रेजी भाषा क्रमश: दोस्रो र तेस्रो स्थानमा पर्छ । सबैभन्दा थोरैले बोल्ने भाषा हो, क्यामिकुरो । यो भाषा जम्मा २० जनाले मात्र बोल्छन् । क्यामिकुरो भाषा दक्षिण अरवाखानमा बोल्ने गर्छन् । विश्‍वमा करिब ६५ सय वटा भाषा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । साथै प्रत्येक दुई हप्तामा एउटा भाषाको अन्त्य भइरहेको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानमार्फत बाहिर आएको छ ।
प्रत्येक २ हप्तामा एउटा भाषा मरिरहेको अवस्थामा आफ्नो पहिचान जगेर्ना गर्न विभिन्न देशमा ‘भाषा बचाऊ’ आन्दोलनहरू पनि चलिरहेका छन् । आफैँ सक्रिय भएर आफ्नो भाषा बचाउन विभिन्न जाति, समुदाय र समाज निरन्तर लागिरहेका छन् । भाषा किन मर्छ या मरिरहेको छ ? सन् २०१५ मा न्यु रिपब्लिकले जनाएअनुसार भाषा मर्नुमा बसाइँसराइ सबैभन्दा ठूलो कारण हो ।
एक देशदेखि अर्को देशमा मानिस अवसरको खोजीमा बसाइँ सरिरहेका छन् । सुखद र उज्ज्वल भविष्यप्रतिको चिन्ताले अल्पसंख्यक भाषाहरू अभिभावकबाट सन्तानमा सर्न सकिरहेका छैनन् । अवसरको खोजीमा विभिन्न देशमा स्थानन्तरण भइरहेको अवस्थामा मातृभाषा वा राष्ट्रिय भाषाभन्दा सोही गन्तव्य मुलुकमा प्रचलित भाषाप्रतिको झुकाव बढ्दो छ ।
प्राकृतिक प्रकोप, हावापानी, मौसम आदि कारणले पनि मानिस बसाइँ सर्न बाध्य भइरहेका छन् । सन् २००८ मा २० मिलियन मानिस प्राकृतिक प्रकोपका कारण नयाँ देशमा पुगेका थिए । सन् २०१० मा इन्डोनेसियाको पपाउ क्षेत्रमा बाढीका कारण डसनर भाषा बोल्नेहरूको धेरै संख्यामा मृत्यु भएको थियो । अहिले उक्त भाषा बोल्ने मानिस अति थोरै संख्यामा जीवित छन् । उक्त भाषा दस्तावेजीकरण मात्र हुन सक्ने अवस्थामा रहेको छ ।
भाषा मर्नुको अर्को कारण हो– अर्थतन्त्र । गरिब देशहरूमा अर्थतन्त्र बलियो नहुँदा स्वाभाविकै रूपमा त्यहाँका जनता सहज र अवसरमय जीवनको खोजीमा अन्य देशमा अस्थायी या स्थायी रूपमा सरेर जाने गर्छन् । नेपालका करिब ४७ लाख युवा वैदैशिक रोजगारीका क्रममा कैयौँ मुलुकमा छन् । ४० प्रतिशत नेपाली युवा नेपालबाहिर रहेका छन् । दिनहुँ १६ सयको हाराहारीमा नेपालका युवाहरू देश छाड्न बाध्य छन् ।
प्रविधिले संसारलाई एउटा सानो गाउँजस्तो बनाइरहेको अवस्थामा विश्‍वव्यापीकरणको प्रभावस्वरूप विश्‍वमा भाषाहरू लुप्त हुन सघाएको छ । विशेषगरी धेरैजसो आदिवासीहरूको भाषा मरिरहेको अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेका छन् । जस्तो : नेपालमा कुसुण्डा भाषा बोल्ने एक मात्र व्यक्ति केही वर्षअगाडि बितिसके । उनको मरणसँगै उक्त भाषाको वक्ताको समेत अन्त्य भयो । यो भाषाको दस्तावेजीकरणमा समेत चुनौती पैदा भइसकेको अवस्था छ ।
भाषा कसरी बचाउने त ? सर्वप्रथम यो राज्यको दायित्व हो । श्रम र रोजगारको उचित अवसर सिर्जना भइरहेका र आफ्ना जनशक्तिहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन गरिरहेका देशहरूमा बोलिने भाषाहरू शक्तिशाली भाषाको रूपमा प्रचलनमा रहँदै आएका छन् । देशको अर्थतन्त्र, बजार, कलकारखाना वा उद्योगधन्दा जति बलियो भयो, त्यति उक्त देशको समृद्धि कायम रहने गर्छ । त्यससँगै उक्त देशका भाषाहरू पनि पुस्तान्तरण हुँदै जाने अवसर पैदा हुने गर्छ । ५ हजार वर्ष पुरानो, बोली आएको र लेखिआएको संस्कृत भाषा अहिले सीमित मानिसले मात्र बोल्ने गर्छन् । संस्कृत भाषा रोजगारका लागि नभएर एउटा सम्भ्रान्त परिवार वा जातिले कर्मकाण्ड वा संस्कार गर्दा मात्र प्रयोगमा ल्याइरहेको अवस्था छ । त्यसैले यो भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपालमा विभिन्न जातीय समुदायहरूले आ–आफ्नो भाषा बचाउन विभिन्न अभियान संचालन गर्नु प्रशंसनीय छ । तर पनि नेपालमै नेपाली भाषाको समृद्धि दिनानुदिन खस्किरहेको पनि छ । नेपाली भाषा अंग्रेजी भाषाबाट अतिक्रमित भइरहेको छ । धेरैजसो सार्वजनिक कार्यक्रम वा सञ्चारका माध्यममा पनि नेपाली र अंग्रेजी सरोबरी बोल्ने प्रचलन व्याप्त छ । ठेट नेपाली भाषा बोल्ने व्यक्ति नगन्य भेटिन्छन् । अझ नेपालीबाहेक भाषा बोल्नेहरूको अवस्था नाजुक छ ।
ठेट नेपाली भाषा वा अन्य भाषाहरू बोल्नुलाई अझै पनि समाजमा पाखे, पहाडिया, अनपढजस्ता तिरस्कृत शब्दवली प्रयोग गरिन्छ । यो आ–आफ्नो भाषिक पहिचान गुमाउँदै जानु र विश्‍वव्यापीकरणको चेपटामा परेको संकेत हो । नयाँ पुस्ताले अंग्रेजी लवजमा बोल्नु र गीत गाउनु समय सान्दर्भिकजस्तो लागे पनि त्यसले भाषिक पहिचानलाई निमिट्यान्न पार्दै लगेको अर्को पाटोप्रति सचेत हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।
बढ्दो सहरीकरण र प्रविधिको विकाससँगसँगै जीवन पद्धति चलाउने चुनौती पनि हामीसामु छ । भाषिक पहिचान र भाषाको अस्तित्व टिकाउनमा यसले समस्यासमेत निम्त्याएको छ । यस्ता समस्या सिर्जित हुनुको पछाडि पुँजीवादी जीवनशैलीको अर्धनक्कल र अर्धचेतनाको उपजले हानि गरेको छ । अवसरसँगै आवश्यक सुविधा पूरा हुने भएकाले यसलाई सजिलै नकार्न सकिन्न ।
जुन भाषा जसले लेख्‍न पढ्न जान्दछ, उसले सजिलै रोजगार प्राप्त गर्दछ । यिनै समस्याका कारण नेपाली भाषा पनि दिनानुदिन संकटमा परिरहेको छ । अबको विश्‍वमा अंग्रेजी, चिनियाँ र स्पेनी भाषाको प्रभुत्व स्थापित भई अन्य भाषा नाजुक र कतिपय त लोप हुने अवस्थामा पुग्न नदिने खालका अभियान आवश्यक भइसकेका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण चीन आन्तरिक विपत्तिमा त छ नै, यसैका नाममा बाह्‍‌य विभेदबाट आक्रान्त पन...
चिनियाँहरू मान्छे हुन्, भाइरस त कोरोना हो !
बढ्दो पुरुष आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण कृषि एक चलायमान, थप जट...
हामीले कस्तो कृषि चाहेको हो ?
‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भारत र चीनको बीचमा रहेर रक्षात्मक विदेश नीति अपनाउनुपर्ने पृथ्वीनारा...
दुई ढुंगाबीच तरुल : असुहाउँदो प्रतीक
साँझपख, म बुलडोजरमा घर फर्किरहेकी थिएँ । त्यो किडन्यापरलाई मैले दरबारमार्गको जेब्रा क्रसिङ...
किडन्यापर दरबारमार्गमा प्यारासाइट फिल्मको डिभिडी बाँडिरहेको थियो
नेपाली समाजका लागि अबको बाटो तय गर्दा कुनै विचारधाराको कैदी नभई खुला दिलले इतिहासका पाठ सि...
नयाँ नयाँ भगवान्‌हरूकाे खोजी (समाजवाद बहस–४)
विश्वका महाशक्तिहरू कनेक्टिभिटीबारे विपरीत फर्किएका बेला नेपालजस्ता देशहरूका लागि प्रतिस्प...